ISKA DHAADHICI - BAARGAAL.NET
✔ Admin on August 28, 2010 0 Comment
Nin baa maalin dhakhtar u tegey isagoo u sheegay dhakhtarka inuu xanuunsanayo. Dhakhtarkii ayaa ninkii baritaan ku sameeyey su'aalana weydiiyey si uu u ogaado inuu ninkan cudurka haya iyo noociisa uu bal helo. Dhakhtarkii wuxuu dareemay in ninkan uu hayo wax la yiraahdo cuqdad nafsi ee uusan cudur kale hayn.
Wuxuuna dhakhtarkii ninkii ku yiri "Waxaan kugula talinayaa inaad iska dhaadhicisid inaadan xanuunsanayn markaas ayaad bogsan doontaa." Ninkii ayaa yiri "Waahagaag dhakhtaroow", oo inuu tago isku dayey, markaas baa dhakhtarii yiri "War
ninyahow lacagtii baadhitaanka isii". Ninkii baa yiri "Dhakhtaroow, adiguna iska dhaadhici inaan lacagtii ku siiyey.